သူမရဲ့ လုံးကြီးပေါက်လှ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပရိသတ်တွေ မြင်သာအောင် အထင်းသား ချပြလိုက်တဲ့ အိချောပိုရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ……. – Shwe Naung
သူမရဲ့ လုံးကြီးပေါက်လှ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပရိသတ်တွေ မြင်သာအောင် အထင်းသား ချပြလိုက်တဲ့ အိချောပိုရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ…….
N N | December 1, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချော အိချောပို ကတော့ ကျရာဇာတ်ရုပ်တွေကို ပီပြင်ပိုင်နိုင်စွာ သရုပ်ဖော်နိုင်တဲ့အပြင် ချစ်စရာကောင်းပြီးပွင့်လင်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ အချစ်ပိုနေကြရသူလေးပါ။
အနေအေးပြီးရိုးရှင်းအေးချမ်းတဲ့ အပြင် ကျော့ရှင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ သူမကတော့ ချစ်စရာကောင်းပြီးချောမောလှပတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့
ဂီတာရှိတ်လေးလို အချိုးအစားကျလွန်းတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေကြားအမြဲရေပန်းစားနေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။
မိန်းကလေးအချင်းချင်းတောင်အားကျရတဲ့ ညို့အားပြင်း အလှတွေနဲ့ မြင်သူတိုင်း ကို အချစ်ပိုစေတဲ့ စူစူလေးကတော့
သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း အမြဲမျှှဝေတတ်ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်း ဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်ဆောင်နေတာကိုလည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်နော်။
ချစ်စရာ Tik Tok ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေ နဲ့ လည်း ဖမ်းစားတတ်တဲ့ စူစူလေးဟာ အခုတစ်ခါမှာလည်း သူမရဲ့ရှိရင်းစွဲပင်ကိုယ်အလှတွေအထင်းသားပေါ်လွင်နေပြီး စွဲမက်စရာကောက်ကြောင်းအလှတွေက မြင်သူတိုင်းကို သဘောကျစေပါတယ်နော်။
ဂီတာရှိတ်လိုအချိုးအစားကျလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှတွေက အထင်းသားပေါ်လွင်နေပြီး သူမရဲ့ တန်ဖိုးမြင့်ကားကြီးကိုမှီကာဆော့ကစားထားတဲ့ အိချောပိုရဲ့ TikTok ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့ ပရိသတ်တွေသဘောကျအချစ်ပိုနေကြမှာပါနော်။
ဆက်ဆီကျကျ ကိုယ်လုံး‌လေးနဲ့ ရွှေရင်မွှာလေးတွေ မြင်သာအောင် လှုပ်ခါ ကပြထားတဲ့ ခင်ရတီသင်းရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး………
ကိတ်လွန်းလှတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုတွေ ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖူးပွင့်ခိုင်ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……..
ထပ်ခါခါ ပြန်ကြည်ချင်လောက်အောင် အမိုက်စား ဖက်ရှင်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် ချောကလျာရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ…….
ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးကို ဝတ်ဆင်ကာ လှပနေတဲ့ နွယ်ဒါလီထွန်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……
ကော်ဖီကြိုက်တဲ့ အချစ်ရေ ခုတော့ မင်းဘယ်မှာလဲ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ သူမရဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ပုံတွေတင်ပေး လိုက်တဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်…..
ဆက်ဆီကျကျ ကိုယ်လုံး‌လေးကို ညို့အားပြင်းပြင်း လှုပ်ခါရမ်းကာ ကပြထားတဲ့ စုလှိုင်ဝင်းရဲ့ ဆွဲမက်ဖွယ် ဗီဒီယိုလေး…….
သူမရဲ့ အတွင်းသား အလှတွေကို ပရိသတ်တွေ မြင်သာအောင် ဆက်ဆီကျကျ ချပြလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ် ရှင်းယွန်းမြတ်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်‌လေးများ…….
ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကို အမိအရ ဖမ်းစား လိုက်တဲ့ မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး…….
တင်းကိတ်နေတဲ့ ‌ရွှေရင်နှစ်မွှာလေးတွေကို ပရိသတ်တွေ မြင်အောင် လှုပ်ခါ ကပြလိုက်တဲ့ မျက်ဝန်းရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး……..